Maninona no zava-dehibe tokoa ny biby - Fanabeazana
Ny biby fiompy noho ny tsy fisian'ny fifandraisana ara-tsosialy
Ny fitazonana biby fiompy dia efa antitra toa an'izao tontolo izao. Taloha dia nitazona alika sy saka ny olona hiarovana azy ireo amin'ny verinia sy ny biby mpiremby hafa. Ny bitro, osy ary akoho dia nampiasaina hamelomana sakafo ary nanome volom-borona ho fitafiana. Ny olona dia niara-nipetraka tamin'ireo biby tao amin'ny efi-trano iray ary nifanafaka sy nifanakaiky. Hafa tokoa ny androany.
Maninona no zava-dehibe ny biby
Ankehitriny, ny biby fiompy dia manana andraikitra hafa. Nitombo ny maha-zava-dehibe ny biby fiompy ary tsy mihaza na miaro intsony ny asany. Ny saka sy ny alika dia mampitombo ny fahasambarana ary, amin'ny alàlan'ny fisian'izy ireo, mampiorina ny fahasalaman'ny olona.
Zava-dehibe amin'ny biby ny biby - © Pixel-Shot / Adobe Stock
Ny fikarohana siantifika dia manamarina ny vokadratsin'ny biby amin'ny olona. Ny alika sy saka dia fanampiana ara-pitsaboana sarobidy ho an'ny tranon'ireo antitra sy toeram-pitsaboana aretin-tsaina. Ny maha-zava-dehibe ny biby fiompy amintsika olombelona dia tsy azo isaina amin'ny isa.
Fa izay efa niaina tamin'ny biby fiompy dia hankasitraka ny fisiany ary halahelo azy ireo raha vantany vao tsy eo intsony ilay biby. Ny alahelo, ny aretina ary ny famoizam-po dia azo alamina haingana kokoa miaraka amin'ny fanampian'ny biby fiompy. Ny filan'ny biby fiompy dia manome ny olona manirery sy ketraka amin'ny asa izay mampihetsika azy ireo amin'ny làlan'ny eritreritra hafa.
Ny andraikitra mipoitra avy amin'ny fitazonana ny biby fiompy dia manery ny olona manirery tsy hitokana ary manampy azy ireo hanana fahazarana isan'andro. Ny diabe isan'andro miaraka amin'ny alika dia mitarika fihaonana eo amin'ny samy olona ary amin'ny fifandraisana ara-tsosialy sy maha-olona.
Ny fifandraisana ara-tsosialy dia zava-dehibe indrindra ho an'ny olona manirery na be taona, marary. Ny fikapohana saka dia manome anao fahatsapana ho akaiky ary tsy irery, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fihetsem-pon'ny olombelona.
Noporofoin'ny siansa fa misy fiatraikany tsara amin'ny olombelona, ​​ny fanahiny ary ny fihetsem-pony ny biby. Ny marary na ny beantitra indrindra dia mahita fiadanam-po amin'ny biby fiompy. Ny filan'izy ireo sy ny fisian'izy ireo tsy tapaka dia mampitombo ny fahatsapana ary mety hihena ny fampiasana fanafody.
Ny biby fiompy dia ho lasa manan-danja kokoa atsy ho atsy, satria ny fanirery sy ny fihenan'ny olombelona, ​​ny fifandraisana ara-tsosialy dia miantso biby mba homena trano. Tsy hoe mila olona ny biby fa mila biby ny olona. Ny ankizy mihalehibe amin'ny biby fiompy dia manana fitondran-tena ara-tsosialy sy fahatakarana bebe kokoa noho ireo ankizy izay tsy mihalehibe biby fiompy.
Ity fahalalana manokana ity dia nitarika cages, terrarium ary aquarium hita matetika kokoa tany an-tsekoly. Ny hopitaly, ny tranon'ireo antitra ary ny fitsaboana ara-pahasalamana ankehitriny dia miankina amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny olombelona sy ny biby. Ny fandalinana siantifika dia mampiseho fa ny olona mitandrina ny biby dia salama amin'ny ankapobeny ary milamina kokoa ara-tsaina. Asehon'ireo fikarohana ireo fa matanjaka ny fifamatoran'ny olombelona amin'ny biby fiompy ary mila biby fiompy isika olombelona.
Tsy soloina ny teknolojia
Tsy misy solosaina na finday be pitsiny afaka mahasolo ny fahatsapana miaraka amin'ny saka saka na mandeha amin'ny alika. Ny fiarahana, ny fanakaikezana ary ny fitiavana tsy misy fepetra ny biby ho an'ny olombelona dia tsy misy dikany. Ny fitazonana biby fiompy dia lasa manandanja kokoa ny fandrosoan'ny teknolojia bebe kokoa. Tsy azo iadian-kevitra ihany koa fa ny biby fiompy dia mifanaraka amin'ny toe-javatra misy ny olony ary mampifanaraka azy ireo amin'ny ankapobeny.
Ny fitokanan'ny olona sy ny haitao avo lenta amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana dia midika fa ny fitazonana biby dia zava-dehibe kokoa ankehitriny noho ny taloha.
Teny nalaina taloha avy tamin'i Francis of Assisi (1182-1226) mpanorina ny Franciscan Order dia ohatra iray fotsiny amin'ny maha-zava-dehibe ny biby fiompy ho antsika: "Ny alikako no tiako indrindra, hoy ianao, ralehilahy, fahotana io. Ny alika dia mijanona ho mahatoky ahy amin'ny tadio, ny olombelona na dia amin'ny rivotra aza. "
Reptiles avy amin'ny biby | Pets
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 6. Aprily 2021 15. Jolay 2021 Sokajy PetsKeywords Aufgaben übernehmen, Pet, Pets, Haustiere für ältere Menschen, Pets ho an'ny ankizy, soziale Bindung
indray Lahatsoratra taloha: Ny voalavo toy ny biby fiompy
more Lahatsoratra manaraka: Voasarimakirana toy ny fikolokoloana tarehy voajanahary - fahasalamana